Sanado ka hor, markii aan bilaabay barashada, Waxaan ilaalin jiray xirfadahayga sheeko-sheegashada inay ku xardhan tahay ‘hal abuurka qoraalka’ waxna uma aan isticmaalin wax aan ahayn qabow, ujeedo, iyo ereyo sharraalare lada qora.
Fikirka kaliya ee qorista ee buugga ayaa i siisay gariir. Waxay igu abuurtay walaac. Ma aanan jeclayn in qoraalkan sharaxaadda dareenka-qabow-qabow i siiyo. Sheekada sheekada aniga igu kaliftay in ay perd u noqoto una wareejiso nuqulkii caajiska ahaa nuqulka farxadda leh ee ka dhigaya akhristeyaashayda dhoola caddeyn, qosol, jees jees iyo oohin.
Waad ogtahay inaad ka guurto nacasnimo ilaa nuqulka nolosha.
Waxyaabaha ay billaabeen inay isbeddelaan markaan ugu dambeyntii siiyey sheekada aniga oo aan xor aheyn oo aan andaaday in HAA, sheekada sheekadu waxay leedahay meel qoraal aan la haleyn karin, Sidoo boerenkool!
Taasi waa sababta aan u qoray hagahan – in aan ku baro farsamooyinka sheeko 7 ee nuugi doonta akhristayaashaada kuna lug yeeleysa oo keliya heer garasho (waxay akhrinaya nuxurkaaga si ay wax u bartaan wax cusub, sax?) Laakiin sidut yeelay annagu bani-aadamku ma nihin wax aan lahayn shucuurtayada).
Ma jiraan was sheekooyin asal ah marka sheekadu ku xiran tahay bani’aadamka boerenkool.
Akhri aan, sababtoo ah waxaan kuu sheegi doonaa sababta.
1 Awoodda Sheekada
1.1 Sababtoo ah 30.000-Sanadka Hore-Hore wuxuu ka shaqeeyaa Maanta
2 Xeeldheer sheekeysi ah # 1: Ku bilow sawir
2.1 Tusaale (mawduuca waa ‘udgoonnada udgoonnada’):
2.2 Talooyin qoraal ah oo ku habboon:
3 Sheeko sheeko xambaarsan # 2: Tusi aadanaha, ma aha oo kaliya mawduuca
3.1 Tusaale (mawduuca waa ‘qiimeynta iyo xallinta arrimaha bulshada’):
3.2 Talooyin qoraal ah oo ku habboon:
4 Sheeko sheekeysi ah # 3: Ku bilow fiidiyaha sheekada sheekada …
4.1 Tusaale (mawduuc waa ‘Blogger u gaar ahaaneed waa inuu iftiimiyaa iyada oo loo marayo’):
4.2 Talooyin qoraal ah oo ku habboon:
5 Farsamaynta sheekada sheekada # 4: noqo barxad shakhsiyeed
5.1 Tusaale (mawduuca waa ‘faylalka cidiyaha’):
5.2 Talooyin qoraal ah oo ku habboon:
6 Farsamaynta sheekada # 5: Ku boodi akhristaha goobaha
6.1 Tusaale (mawduuca waa ‘dayactirka gaariga shilka kadib’):
6.2 Talooyin qoraal ah oo ku habboon:
7 Sheeko sheeko xambaarsan # 6: Isticmaal ficil anekdote …
7.1 Tusaale (mowduuc waa ‘caroreta looga cuno khudaarta’ loogu talagalay barta internetka ee hooyada):
7.2 Sideen Ubadkeena Cunnahay Inaan Cunno Khudrado
7.3 Talooyin qoraal ah oo ku habboon:
8 Farsamaynta sheekooyinka # 7. La wadaag sheekada akhristaha…
8.1 Tusaale (mawduuca waa ‘Adeegsiga shabakadda si loo barto’):
8.2 Talooyin qoraal ah oo ku habboon:
9 Waayo-aragnimada Hore-Dhaqanka
9.1 Matthew Gates ee ConfessionsOfTheProfessions.com
9.2 Silvia Gabbiati, Kaaliyaha Caafimaad iyo qoraaga hore
10 Akhriso la soo jeediyay: Xisaabinta Maskaxda ee Sean d’Souza
Sawir: Storytelling, Library Concord deur Daraasadaha Local NSW (cc)
Alex Limberg ayaa qoray warqad cajiib ah sheeko ku saabsan BoostBlogTraffic.com taasi waxay igu kalliftay ‘ilaa khadka ugu dambeeya, oo bal qiyaas waxa – si uu u qoro maqaalkiisa ku saabsan sheeko-sheegashuo sheekadayo!
Waxa uu u sheegay sheekada sheekada ee Scheherazade Hal kun iyo hal habeen si ay u abuuraan xiisaha akhristaha oo si caqligal ah u maareynaya si ay u ilaaliyaan dulsaarkan nool:
Habeen kasta, boqorku wuxuu naftiisa u huray hal maalin oo kaliya.
Laakiin intee in le’eg ayay sii socon kartaa ciyaarta khatarta ah?
Waa inaad sugto si aad u ogaato. Laakiin marka hore, aynu eegno hiddaha xoogga leh ee Scheherazade u shaqeeya.
Sababtoo ah 30.000-Sanadka Hore-Hore wuxuu ka shaqeeyaa Maanta
Ilaa iyo inta uu bani-aadamku jirey, waxaan ku adkeynay inaan ku qanacsanahay hal dal. (Maya, ma aha waxa aad u malaynayso.) Waxaan ka hadlaa sheeko-qorista.
30.000 sano ka hor, markii ay awoowayaasheen ku dhajiyeen dhagax madoobaadkii ugu dambeeyey ee mammoth ku galay derbiyada dhagaxa ah, saaxiibadooda xiirta leh waxay ku khasbanaadeen in ay sheekadan u ist.
Taasi waa sababta oo ah baahida loo qabo sheekooyinka ayaa si qoto dheer uga dhex mara maskaxda.
Alex ayaa markaa sii waday inuu sharraxo page aad ugu guursan karto sheeko-qorista en baloog garaynta ka hor intuusan u sheegin akhristaha, baaragaraafyadii ugu dambeeyay ee jagadiisa, sid sheekada Scheherazade u dhammaatay.
Ma qoslayo – Boostadiisu waxay heshay xNUMX faallooyin xamaasad leh!
Waxaad aragtaa, nolosha lafteedu waa sheekooyin. Wax kasta oo aan baran karno, ka fakirno oo aan samayno sheeko sheeko – sheekada nolosheena oo hier is ‘n voorbeeld van saks:
Is dit moontlik dat u dit wil sien? Waxaa jira sheeko ah inaad ka soo qeybgashay koorsada tolidda ee aad u malayn jirtay inay caajisnimo noqon karto laakiin taasi runtii waxay kuu furey xirmo badan oo hal abuur leh.
Maad lacag badan ka sameysay iibinta hilibka maraqa? Waxaa jira sheeko ku saabsan side aad u kobcisay xiisaha maraqa sanadihii la soo dhaafay iyo guusha aad bilowdey inaad soo aruuriso markay dadku ammaaneen cuntadaada hal-abuurka leh.
Ek sien hoe u Alex in uu pos plaasvind, en u kan u buuxsamaa sheekooyinka – waxaad u baahan tahay waa makiinad raadin si aad u hesho kuwa (dhabta ah ama khiyaaliga ah) waxaad u baahan doontaa poste – iyo leo wareysi u yeelan karto sheeko dhab ah oo lagu kalsoon yahayakhristayaashu waxay jecelyihiin joornaalada wareysiga ku salaysan).
Miyaad dhadhi kartaa awoodda sheekada?
Wanaagsan. Taasi waxay tidhi, iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka sheekooyinka 7 aad halkan u joogtid.
Xeeldheer sheekeysi ah # 1: Ku bilow sawir
U muuji qof. Shay. Meel. Adeegso ereyo kula hadla shanta dareen oo ka caawiya akhristaha inuu "Arko" sheekada aad rabto inaad sheegto.
Qaybta ugu sareysa ee abuuraysa sawir maskaxeed ayaa akhristaha sii wata akhrinta, ka sii akhri oo sii wad dhibcahaaga. Looma baahna luqad qoto-dheer oo was looga qabanayo akhristaha, laakiin muuqaal ah oo ku riixaya oo ku buuxiya maskaxda kaliya, lakiin isaga oo dhan.
Tusaale (mawduuca waa ‘udgoonnada udgoonnada’):
Sanka ayaa sanqadhay sidii aan ku duugay dukaanka raashinka.
Cufnaanta xayawaanka iyo beerta ayaa iftiiminaya niyaddayda, waxaanan joojiyay in aan neefsado. Kadibna waxaan eegay hareeraha, waxaan rajeynayaa in aan arko ubax, laakiin ma aanan arag.
Dukaamkii dukaanka ayaa i fiiriyay oo is taagay. "Maahan ubax dhab ah, kaliya waa gurigan udgoon ee ABC Brand," ayay tidhi.
Neefta ayaan qabsaday. "Waa maxay carafadan?"
Talooyin qoraal ah oo ku habboon:
Haddii muuqaalka saxda ahi uusan kuu imaan, ama aad ubaahantahay dhiirrigelin badan, ka fikir filimada, sheekooyinka gaagaaban iyo xitaa xayeysiinta TV-ga. Fiiri oo akhri qaar ka mid ah oo fiiro gaar ah yeelo, adigoo isku dayaya inaad isticmaasho ereyo u dhigma sawirada.
Farsamada kale ee aan isticmaalo badanaa waa in la helo sawir isticmaalaya Wareega of Pixabay (ama kaliya adiga oo adeegsanaya mashiinka raadinta sawirka tabka) oo aad u isticmaashid si aad uga caawiso dareenkeyga sidii aan ula xiriiri lahaa sihax waxaa laga yaabaa in aan sharraxo waxa aan ku arko adigoo isticmaalaya ereyada dareenka.
Sheeko sheeko xambaarsan # 2: Tusi aadanaha, ma aha oo kaliya mawduuca
Ku rid waayo-aragnimada aadanaha ka hor mawduuca haddii aad rabto in aad jooji akhristaha oo ku hayso bogga bilowga ilaa dhammaadka.
Markaad sheeko u sheegto, diiradda ma saarna mawduuca aad isku dayeyso inaad akhristaha ka dhigto – haddii aad taas sameyso, nuqulku wuxuu noqon doonaa mid caajis ah oo sharraxaya, akhristayaashana manier lumi doonaan. Taabadalkeed, uga sheeg bini aadamka sheekada, adeegso aargudasho, aadanaha u iftiimiya inta aad ka hadlayso mowduuca gacanta ku haya.
Mawduucaagu waa aaladda iyo deegaanka, laakiin bina aadamka ayaa ah hor-u-kaca. Haddii aad rabto akhristayaasha in ay xiiseeyaan waxa aad isku dayeyso inaad dhahdo ama aad ka dhaadhiciso inay wax iibsadaan, ka caawi inay naftooda ka dhex helaan bini-aadamka sheekada – manier u fududaan doonayiayadah u dieselfde.
Tusaale (mawduuca waa ‘qiimeynta iyo xallinta arrimaha bulshada’):
Lammaanaha bloggeygu ma gabi ahaanba ku qanacsanayn inaan samayn karno shaqada internetka oo dhan. Dhamaan riwaayad badan, dadaal aad u yar oo ay sameeyaan xubnaha ugu furfuran si ay u keenaan qiimo dhab ah oo looxyada ah.
Laakiin intii aan diiradda saarayay barashada xeeladaha iyo tabaha cusub ee lagu hagaajinayo bartayada internetka, lammaanahaygu kuma is tudhin dadaallada ah in bulshada laga dhigo mid shaqeysa – waxay soo martay toboneeyo xargheida ahoeha dirtay. mid, weydiinta su’aalo iyo wax ka barasho iyaga – si toos ah – waxay runtii rabeen inay ku arkaan baraheena.
In kasta oo aan ka soo dhawaaday dhibaatada inta ugu badan ‘dhinaca farsamada’, waxay si toos ah ula tagtay dhibaatadii dhabta ahayd ee ina haysata – maahan dhibaato madal, laakiin waa dhibaato dadka.
Tani waa page dhabta ah ee bulshada uga soo jeestay aag riwaayad ah si ay u hesho kobcin shakhsiyeed iyo wada shaqeyn: (…)
Keliya ha sharraxin ficilada qofka ku jira sheekadaada, laakiin xooga saar culeyska ugu weyn ee ku saabsanaankooda iyo fikradaha ama falsafada ganacsiga ee u horseeday inay qabtaan wixii ay qabteen.
Waxaad rabtaa akhristayaashaada inay xirtaan kabaha qofka sheekadaada, inay ka fikiraan oo ay dareemaan waxa ay dareemayaan ilaa ficil kasta oo la qaado oo tilmaamo kasta oo lagu bixiyo boostada ay u muuqato inay cawaaqib siakrista inaad xiriir la sameyso a heerka garashada marka lagu daro heerka shucuurta.
Sheeko sheekeysi ah # 3: Ku bilow fiidiyaha sheekada sheekada …
… ka dibna sii wado qaddiyada sheekada sheekada mawduucaaga
Fiidiyowgu maahan inaad adigu lahaato, laakiin waxay qasab ku tahay inaad gudbiso qodobkaaga oo aad soo bandhigto sheekadaada. Waxay noqon mapa fiidiyow muusig, fiidiyo fiidiyo ah, goob ama filim si gaar ah loo leeyahay (haddii aad leedahay xuquuqo ama filimku ku yaallo qaybta dadweynaha – waad awoodaa Tixgeli Archive.org arintan).
Qaado sawir kasta oo muhiim ah ama farriin fiidiyoow ah oo ku soo celi qaybta hoose ee boostada – ku xir sheekada mawduucaaga en talooyinka aad siiso akhristayaashaada.
Tusaale ahaan, plaas dit deur Will Blunt, ka dib qaybta intro, wuxuu isku xiraa muusikada muusikada Beatles ("Caawinta ‘n bietjie hulp ee my vriende") Ek wil graag blogboeke en blogs praat, en dit sal help met bloggers, en Will Blunt sal jou help om die band te sny:
Diyaar ma u tahay?
Vertaal in Afrikaans: Waxaan rabaa inaad ku ciyaarto fiidiyowgaan oo dhageyso muusikada deur Beatles soos u ook ‘n hupstoot gee ….
Fiidiyowgaagu wuxuu sheegi karaa sheeko ama wuxuu ‘kharribi karaa’ farriin – bladsy xayeysiinta TV-ga ama fiidiyow muusig ah – laakiin qaabku was macno ah ma leh; Waxa muhiimka ah waa in fiidiyowgu laftiisu bixinayo riixitaan ka dibna dhammaystira mowduuca lagu xalliyay bartaada blog.
Tusaale (mawduuc waa ‘Blogger u gaar ahaaneed waa inuu iftiimiyaa iyada oo loo marayo’):
Aqriyayaashaadu ma ku arki karaan shaqo firfircoon?
Waxaad u dareemi kartaa sidii meel mugdi ah, oo aan lahayn nalkaaga, maxaa yeelay iftiinka qof walba wuxuu joojiyaa dadaalkasta oo iftiimaya.
Laakiinse adigu ma ihidin inaad het iyo goorba u adeegto gehad.
Katy Perry wil dit graag hê:
Waxaad tahay shaqo firfircoon, waxaad tahay mid gaar ah, sida daraadeed waxa ugu fiican ee aad u soo iftiimiso.
Qofna ha u sheegin qofka aad tahay.
Sidee ayaad u noqon mapa sawirkaaga mugdiga ah ee madow, cabudhinta, cabsida leh ee aad u jilicsan, dabiiciga ah, shakhsiyaadkaaga jacaylka akhristayaasha (oo run ahaantii kuu muuqda)?
Halkan waxaa ku qoran talooyin 6: (…)
Waxaad isticmaali mapa a fiidiyowga-koowaad ama a farriin-hore ujeedo markaad go’aansato inaad isticmaasho fiidiyow na qalab sheeko op qoran boostada blogka.
Will Blunt wuxuu u adeegsaday fiidiyowga muusikada ee Beatles qaab fariin ah marka hore – farriinta ku jirta fiidiyowga wuxuu la mid yahay fariinta uu ku gudbiyo boostadiisa wuxuuna dhameystirayaa, laakiin boostada ayaa keligeidiyai taaisita.
Tusaalaha aan kor ku soo qoray ayaa adeegsanaya fiidiyowga fiidiyowga ee Katy Perry oo leh qaab fiidiyoow ah – fiidiyowgu wuxuu soo bandhigayaa mawduuca wuxuuna bixiyaa dulmar guud oo ku saabsan farriinta asaasigaah ayah ya.
Doorashada habka aad adigu tahay adiguna waxay ku xiran tahay noocyada kala-soocidda dhagaystayaashaaga dhageysta si aad u wanaagsan.
Farsamaynta sheekada sheekada # 4: noqo barxad shakhsiyeed
Qoraal shakhsi ahaaneed ayaa rafcaan u ah akhristayaasha sababtoo ah waxay ka hadlaysaa dareenka, waxa ay sheegaysaa nolosha, waxay muujinaysaa bini-aadanka ka danbeeya nuqul
Akhristayaashu waxay jecel yihiin boodhadh shakhsi ahaaneed, sababtoo ah waxay naftooda ka heli karaan talooyinka noloshaada, so ay ula xiriiri karaan astaamaha sheeko ama sheeko gaaban.
Waxaan ka hadlayey side loo qoro side blogger shakhsi ahaaneed halkan oo ku taal WHSR waarheid hore, laakiin qaybtan waxaan rabaa inaan ku tuso side to u isticmaalo sheeko shakhsi ah si aan ugu qoro boostada maaliyada ee Luana.me blog:
Tusaale (mawduuca waa ‘faylalka cidiyaha’):
Waxaan ahaa 10 markii arday fasal ah uu ii sheegey inaan haysto ciddiyaha wareegsan.
Waxaan eegay gacmaheyga oo arkay faraheyga haa, waxay noqon kartaa mid sax ah, waxay eegay qaabka wareega ee tiradayda.
"Laakiin ma rabo inaan xirto laalaabka," waxaan is-idhi qeylada.
"Uma baahnid isticmaalka nalalka," ayuu raaciyay macallinkiisa, "kaliya uun waraaq adag oo wanaagsan si loogu dhigo qurux iyo daryeel."
Ma aanan arkin fasalka asxaabteyda sannado badan, xitaa xitaa ma soo celin magaceeda, laakiin iyadu waxay ahayd mid xaqiiq ah – Uma baahnin inaan lakulo cirifka, kaliya farabadan wanaagsan ee foollada ciddiyaha ayaana dahaha Aad baai u wanaagsanayd!
Markii aan 14 ku soo noqdey, mid ka mid ah aabaheyga ayaa igu iibsaday nadiifinta manhajka oo ku jira laba faylasha ciddiyaha aluminium. Waxay ahaayeen kuwo aad u qurux badan oo qurux badan, laakiin waxay qabsadeen sanado badan iyo dhowr maydheen wax qalad ah, sidaas darteed waa inaan iska tuuraa.
Hadda waxaan helay mid ka mid ah labada ikhtiyaar ee soo hartay:
Faylasha caarada caagga ah (waxay ku kacayaan dhowr sent by dukaanka Shiinaha)
Faylasha kala ah balaastiga, barkad nus, ama dhammaan galaaska
Anigu waxaan jecelahay faylasha balaastikada caaga ah, laakiin waxay u muuqdaan inay si fudud u jebinayaan (…)
Faylasha muraayada indhaha waa gebi ahaanba sheeko boerenkool.
Tani waa qaabkayga. Waxaan kugula talineynaa inaad ku tababarato oo aad ku dhaqanto illaa aad ka hesho qaab-shaqsiyeedkaaga.
Waa mid aad u jilicsan in la sii wado sheekadaada shakhsi ahaaneed adiga oo aan ku darin qiimaha akhristaha. Ka fogow, sababtoo ah waxay ku riixi doontaa akhristaha halkii ay ku soo jiidi lahayd.
Xusuusnow in akhristaha ugu fiican uu kuugu yimaado balooggaaga ujeeddo gaar ah – in wax laga barto wax cusub oo ku saabsan waxa u gaarka ah ama warshadooda, in la baaro fikradaha kala duwan ee ku saabsan mowduuc gaar laah aha.
Sheeko-sheegashadu waxay u sahlaysaa iyaga inay naftooda ku milmaan mawduuca (fiiri farsamada xigta # 5) oo ay ku hayaan diiradda, sidoo kale la xiriiraan khibradaada oo ku xirmaan heer aadamiga ka sii badan, laakiiash aha ka dib – taas, waxay leeyihiin buugaag cusub iyo boggaga ay ka jecel yihiin (dhabta ah).
Hayso sheeko shakhsi ah iyo talooyin ku saabsan dheelitirka.
Farsamaynta sheekada # 5: Ku boodi akhristaha goobaha
U akhri akhristahaaga gacanta kuna soo celi muuqaalka. Bal fiiri, siday u arkeen oo ay u wada muuqdeen.
… Waan hubaa inaad sawirkaas uun sawday, ma adiga? Waxaa lagu dhex geliyay goobaha, waxaad aragtay goobtu waxay ka dhacday indhaha indhahaaga hortooda.
Waa wixii uu Alex Turnbull oo reer Groove ka qabtay shaqadiisa cinwaan looga dhigay “Qiimeeynta Qiimeenta ee Kordhay Saxeexyada Bilaashka Bilaashka ah ee 358% (Dakhliga 25%)". Wuxuu ka bilowday goob uu isaga en kooxdiisuba ku hareeraysan miiska kijada, isaga oo ka hadlayay istiraatiijiyadaha qiimaha.
Fadlan, bont boostada oo akhristo intro – waxaad ku nadiifin doontaa xaq, so het jy gedien na die fadhidey miiska isku mida iyaga.
Tani waa awooda sheekada: waxay kugu dhejineysaa midigta goobta.
Goobta uu ku yaallo Alex Turnbull se pos waa mid jireed, laakiin dejintaada sidoo boerenkool waxay noqon kartaa mid qiiro leh: tusaale ahaan, aqristahaada waxaa laga yaabaa inuusan laheyn baahi deg deg ah tilmaamaha wacyigelinaday akain wahaa arkaan haddii ay dhab ahaantii yihiin waxay u baahan yihiin, marka waxaad sheeko u sheegi kana si ay u kiciyaan rabitaankaas.
Nuqul ku saabsan akhriska oo dareen ahaan ku xiran, me. Liz se pos cinwaankeedu ahaa “Sidee loo qoraa Nuqulo Nadiif ah oo Dammaanad ah oo iibiya iibka"Waa akhris wanaagsan.
Tusaale (mawduuca waa ‘dayactirka gaariga shilka kadib’):
Burbur! Gaarigaaga wuxuu ku dhufanayaa derbigaas bulukeetiga gaaban ee aadan arag.
Ugh! Waad walwalsan tahay, waxaad ka baqaysaa in was aan la soo koobi karin ay dhacaan. Adigu naftaada iska hubso – dhamaan waa hagaag. Pappa kale oo ka socda waddada ayaa u yimid inay arkaan side aad u socoto, laakiin runtii, adigu waad fiican tahay.
Waa gaarigaaga taas oo aan caadi aheyn… haba yaraatee! Waa inaad ku qarash gareysaa lacagta dayactirka hadda, iyo wanaag, jeegaaga mushaarka ee soosocda maahan berri.
Laga yaabee haddii aad haysato lacag, waxaad kiraysan lahayd adeegga dayactirka baabuurta – just yaabee inaad adigu – laakiin waa inaad dib u cusbooneysiisaa qaybaha ugu muhiimsan naftaada.
Miyuu yahay mid caan ah?
Halkaas ayuu ahaa, oo la sameeyay. Dhab ahaan. Tilmaamahan, wax kasta oo aan ka bartay khibraddaas:
Sida loo dayactiro nalalka
Sidee loo tirtiraa istiraatiijiyadda ugu wayn
Sidee loo hagaajiyaa quraarad jaban
Isticmaal malaysigaaga – ma arki mapa muuqaalka indhahaaga ka hor? Miyaad dareemi kartaa waxa uu dabeecaduhu dareemayo?
Haddii aadan kari karin, akhristahaagu sidoo boerenkool ma sameyn karo.
Kaliya ha qorin muuqaalkaaga oo sii wad shaygaaga, laakiin aqri, dib u akhri oo tafatiran sheekadaada ilaa aad ka saxdo (waa jilibkaaga boostada!).
Sheeko sheeko xambaarsan # 6: Isticmaal ficil anekdote …
… ka dibna weydii akhristayaashaada su’aalaha ku saabsan ka hor intaadan bixin talo bixin mawduucaaga.
Fiiq-sanku wuxuu ka imaan karaa noloshaada, shaqadaada ama nolosha qof boerenkool. Waxa muhiim ah waa inaad u isticmaasho halka aad ka bilowdo si aad akhristaha ugu Horseeddo nuxurkaaga oo aad siiso meelaha saxda ah ee lagu fahmo farriintaada.
Ka fogow khiyaanooyinka soos qaybo sharaxaada dheer iyo faahfaahin aad u badan oo aan loo baahnayn – waxaad sheeko u adeegsaneysaa inaad gudbiso fariin, ma qoreyso sheeko gaagaaban.
Tusaale (mowduuc waa ‘caroreta looga cuno khudaarta’ loogu talagalay barta internetka ee hooyada):
Marwalba manier adagtahay in caruurtaydu ay cunaan miro iyo qudaar. (…)
Waxaa jirtay hal mar halkaasoo gabadhaydu diidday cunnadii oo dhan sababtoo ah waxay ahayd saliid ku salaysan. Waxaan rabay inaan timaha ka rito! (…)
Miyaad tan la kulantay?
U kan help om ‘n karwei te maak in uxan-yare?
Sideen Ubadkeena Cunnahay Inaan Cunno Khudrado
Xalkayga aniga ayaa ka yimid ninkayga. Waa kuwan page ay noo shaqeyneysay: (…)
Samee kala-guurka qaybta labaad ee boostadaada side ugu sahlan ee akhristaha, adoo isticmaalaya hal su’aal ama laba su’aalood haddii aad u aragto muhiim.
Waxaa muhiim ah in akhristuhu ka jawaabo fal-celintii ugu horreysay ka hor intaadan sii wadin ka hadalkaaga mowduucaaga ama talobixintaada bixiso. Faa’iidada? Waxay ku tusi doonaan xiise badan oo ah waxaad u diyaarisay iyaga inay akhriyaan oo ficil yeeshaan.
Farsamaynta sheekada sheekadu waxay ka shaqeysaa haddan aad ku dartid wicitaan boerenkool oo labaad dhammaadka boostadaada, weydiiso akhristayaashaada inay talobixin kuugu dhejiyaan iyo inaad wadaagto sheekadooda, sidoo kaley, an anadd dieselfde.
Eeg staaf # 7 met ‘n bladsy met ‘n goeie weergawe van die webwerf.
Farsamaynta sheekooyinka # 7. La wadaag sheekada akhristaha…
… oo ka jawaab su’aalaha boostadaada.
Samee caado si aad u weydiisatid akhristayaashaada inay wadaagaan sheekooyinkooda dhamaadka boostada, ama faallooyin ama email ahaan.
Ka dib, u isticmaal sheekadooda si aad ugu bilowdid qoraal cusub oo aad hubiso in aad wax ka qabato dhammaan qodobbada looga baahan yahay si looga jawaabo akhristaha su’aasha ama loo xalliyo dhibaatadooda.
Waxaa lagu siiyay inaad haysato rukhsad akhristaha si aad sheekada ugula wadaagto bartaada, waxaad u istcimaalayn kartaa jumlad – iyo caddeyn daneyn dhab ah oo ku saabsan la macaamilka akhristayaashaada – si aad ugu hobahawa ao iyaga) waxay la kulmaan maalin kasta ama waxay u baahan yihiin in lala qabsado.
Tusaale (mawduuca waa ‘Adeegsiga shabakadda si loo barto’):
In feallo ah ons post ugu dambeysay, akhristaha ons Matthew Smith qoray:
In alle inta aan diirada saarayo shaqadayda oo aanan ku dhex wareegin shabakada si aan u ugaafto, Waan ku fiicanahay inaan tago… ama sidaas ayaan u maleeyay! Laakiin runtii waa wax badan, aad uga adag in ficil lagu sameeyo iyada oo aan anshax la marin. Maxay kula tahay Ma inaan tijaabiyaa farsamada Pomodoro ama wax la mid ah?
Gacaliye Gacaliye (dit is ‘n dag van die dag deur akwarina barkadeyda), waxaad hubaal wat u kan inaad tijaabiso farsamada Pomodoro si aad u maamusho waqtiga cilmi baarista ee Webka, laakiin aan u sheego tan:
Waxaad ka sii fiicnaan doontaa haddii aad isticmaasho Pomodoro oo aad la wadaagto qorshe waqti fiican ah.
Tusaale ahaan, waxaad ku siin kartaa daqiiqado 20 oo ka baxsan 30 si aad u daraasatid qoraalkaaga taariikhda, ka dibna isticmaal saacadaha 10 ee soo haray si aad u daryeesho oo aad ugu raaxeysatid Hadal.
Ka xulo xulashada sheekooyinka akhristaha iyo su’aalaha aad ugu isticmaasho qoraalladaada – akhristayaasha badanaa waxay ku weydiin doonaan su’aalo badan isla markaana si farxad leh ula wadaagi karaan fal kasta oo shaqsiyeusus kaa inaad ku dhejisaa dhageystayaashaada marka het baahi.
Sidaas darteed naftaada is weydii: Sheekadan akhristaha sheekee miyay habboon tahay in la isticmaalo boostada ku saabsan mawduucan? Miyuu akhriyahaygu aqrisanayaa akhristaa oo ka bartaa?
Si kale haddii loo dhigo, ha iloobin akhristayaasha boerenkool dadaalka loogu jiro in lagu daboolo baahiyaha akhristaha hal.
Maxay yihiin xitaa farsamooyinka 7 jaar oo aan qiimaha lagu darey xisaabaadka kowaad ee qofka ee awoodda sheekada?
Waana sababtaas sababta aan u wareystay Matthew Gates van Qirashada Professies iyo Silvia Gabbiati, kaaliye caafimaad iyo qoraa hore oo loogu talagalay joornaalada Talyaaniga, labadaba taageerayaasha weyn ee sheekada sheekada ee qorista xirfadda.
Matthew Gates ee ConfessionsOfTheProfessions.com
Matthew Gates wuxuu la wadaagay aragtidiisa iyo waayo-aragnimadiisa sheekooyinka:
Websaydhaydu waxay ahayd mid aad u guuleysatay sababtoo ah sheeko-xumo.
Hadday run tahay ama haddii boerenkool, qof kastaa wuxuu jecel yahay sheeko wacan, laakiin wuxuu ka muhiimsan yahay: dadku waxay jecel yihiin sheekooyin ay la xidhiidhi karaan oo qosli karaan.
Dadku waxay jecel yihiin inay akhriyaan sheekooyinka halka ay dareemayaan inay wax ka akhriyayaan naftooda, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay soo mareen ama ay soo mareen xaalad cayiman. Qabso xiriirkaas oo waxaad yeelan doontaa akhristaha runtii jecel waxyaabaha aad qorto. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa hal maqaal oo uu qof la xiriiri karo waana macquul inay dib u soo laaban doonaan haddii aad tahay nooca sheekada sheekada. Weligay waxaan ahaa nooca sheeko-sheegashada: marka aan sheeko u sheego, waxaan jeclahay in dadku ay la xiriiraan waxa aan sheegayo. Haddii boerenkool, sheekadu waa caajis dhagaystayaasha aan la xiriiri karin.
Waxay la mid noqon lahayd qof ganacsade ah oo ganacsade ah oo hodan ah, kaasoo ku dhashay qoys taajir ah, runtii weligiis ma uusan la kulmin dhibaatooyinka adag ee jabsi ama liita, isagoo isku dayaya inuu liibo noloshooda. Qof miskiin ah runti kama daneeyo halganka qof hodan ah oo hodan ah, gaar ahaan haddii ay ku dhasheen. Waxaan isku dayaa inaan u sheego sheekooyinka sida majaajillada ah. Sababta oo ah guusha ay majaajiil badani u qabaan waa inay doortaan mowduucyo dhagaystayaasheedu la xiriiri karaan. Louis CK, oo aan jeclahay, ayaa si weyn loogu yaqaanaa inuu side sameeyo: wuxuu ku jiraa bartamihiisii ​​40s, waa la furay, carruurta 2, oo leh dhibaatooyin fara badan oo maalinle ah iyo duruufaha uu la kulmayi dayo hado , wuxuu leeyahay dhagaystayaasha oo dhan qosol markasta. Ma dhahayo wax cusub oo ka duwan. Wuxuu u sheegayaa dhagaystayaashiisa ku saabsan waaya-aragnimadiisa gaarka ah, kuwa la yaqaan, khibradaha la midka ah iyo waxyaabaha saxda ah ee dhagaystayaashiisu ka fekeraan ama ay marayaan noloshoodaax kaha aha leh ee sheeko-sheegashada .
Websaydhaydu waxay ku saabsanayd ma aha oo kaliya waayo-aragnimadayda gaarka ah, laakiin dhegeysigeyga dhageysiga dadka kale iyo waxa ay ku dhex mareen shaqada, fiicnaanta ama xun, oo qoraal ah. Hadduu macmiilku yimaado oo uu tilmaamayo $ 50 ama shaqaale isku-duwaha ah oo isku dayey in ay gadaal u soo ridaan dhabarka ama madaxdooda waxay ahayd asshole. Wax kasta oo ay dhici karto, qof kastaa wuxuu leeyahay sheeko sheegaysa. Dareenkayga: haddii aad weligaa shaqaysay maalin noloshi ah, waxaad leedahay sheeko sheegaysa.
Waxaan ka faa iidaystay ujeeddadan oo waa page www.confessionsoftheprofessions.com ku dhashay. Xaqiiqdii anigu ma aqaan waxa qof walba marayo iyo waxa soo maray, sidea vertoon waxaan u furay boggeyga si aan ugu oggolaado qof kasta inuu dhejiyo. Waxaan tixgeliyaa "degelkeyga" bogagga "dadka". Xaqiiqdii maahan aniga shaqadeyda, aan ula wadaago kumanaanka tabarucayaasha ah Waxaan ahay kaliya isku-duwaha xaqiijinaya in maqaalku si fiican u akhriyo, khaladaad hingaad ah aan lahayn, iyo inuro fiika sao la hao maqaalka. Waxaan jadwaleeyaa taariikhda daabacaadda waxaana loo dirayaa mareegta adduunka oo dhan. Aniga oo la wadaagaya websaydhkayga dadka boerenkool isla markaana furaya si qofkasta uu gacan uga geysan karo, waxay iga caawineysaa inaan sii wado daabicista maqaallada maalin kasta, iyo sidoo boerenkool [ku dhiirrigelinta] kada iga caawisa taraafikada websaydhkayga Dhammaantiin waa xiriir wada-shaqeyn weyn leh oo wadaagidda taraafikada.
Sanado badan, websaydhku wuxuu ka tegey kaliya hooyaday iyo gabadhayda akhrinaysa illaa kun kun booqda maalintii. Kaliya waxaan ku faraxsanahay in dadku ay helayaan maqaalkeyga oo ay ku raaxeystaan ​​maqaallada aan halkaas ku soo bandhigayo. Waxaan rajeynayaa inay dadku waxbadan ka helaan qodobbada waxayna ku kaalmaynayaan noloshooda gaarka ah qaab uun.
Silvia Gabbiati, Kaaliyaha Caafimaad iyo qoraaga hore
Saaxiibkay ou Silvia Gabbiati, kaaliyaha caafimaadka iyo barbaariyaha xarunta adeegga waayeelka ee Rome, Italië, waxay ku heshiiyeen wareysi ay ka sheekeystaan ​​Facebook khibradaheedii hore iyada oo sheeko xariir ah ayadoo qoraaga daha ya yah ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
Luana: Waxaan ogsoonahay inaad isticmaasho farsamaynta sheekada qoraaladaada. Waa maxay sababta doorashadan iyo natiijooyinka ay kugu soo gaartay?
Silvia Gabbiati: Farsamaynta sheeko-sheegashada ayaa ii oggolaatay in aan ku abuuro dareen xoog leh iyo rafcaan qiiro leh akhristayaasha: anoo akhrinaya sheeko waxaan ku garan karnaa nafteena qiyamka ay soo bandhigto waxaanan ku heli karnaa arag. Akhristaha wuxuu dareemayaa inuu ku lug leeyahay sheeko la aamini karo oo khibrad ah, xitaa si ka fiican haddii ay ka timaado nolosha qoraaga, markaa dareenka, xusuusta, fikradaha iyo fikradaha shaqsiyadeed waxay helah kai Xaraashyadu het iyo goor waxay deur muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta damiirka aadanaha gehad. Waxaan rumeysanahay farsamadaan, haddii sifiican loo qabtay, inay xambaarsan tahay awood weyn, gaar ahaan awooddeeda si ay u muujiso wajiga aadanaha ee xaqiiqada iyo xaaladaha sheekada lagu sharraxay oo inta badan loo arkoah shay akoah.
Luana: Ma heshay jawaab celin wanaagsan mid ka mid ah akhristayaashaada ama tifaftirkaaga si aad u isticmaasho farsamada sheekada?
Silvia Gabbiati: Waxaan sameeyay, laakiin mawduucyada guud ahaan, gaar ahaan farsamada sheekada.
Luana: Waa maxay nooca jawaab celinta ee aad heshay?
Silvia Gabbiati: Waxay jecel yihiin qaabkaygii qoraaga iyo gaar ahaan bani-aadamka lagu soo bandhigay [sheekooyinka].
Luana: Waa noocee noocee ah ayaad u isticmaashay sheekada?
Silvia Gabbiati: Mararka qaarkood waxaan ku sharxay xaaladaha khayaaliga ah, isku dayaya in ay qaabeeyaan sheekada sheekada sheekada sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah si loo sameeyo habka aqoonsiga [ee akhristaha] aad u awood badan oo awood leh; mararka boerenkool waxaan isticmaalaa xaalado aan ku noolaan jiray qofkii ugu horreeyay, laakiin waxaan yeeshay dabeecad isbeddel ah oo iyaga ku jira [sheekada].
Luana: Waa maxay talada ugu muhiimsan ee aad siin kartid qorayaasha doonaya in ay isticmaalaan farsamada sheekada?
Silvia Gabbiati: Marka ugu horeysa, sharax xaaladaha dhabta ah ee kicin kara xiisaha dadka. Qofna ma jecla inuu akhriyo sheeko cad oo aan caadifad lahayn ama rabitaan qoraal ah! Kadib, si faahfaahsan u sharax macnaha guud, gaar ahaan protagonist-ka, si qofka akhrinaya u bartaan asxaabtiisa wuxuuna bilaabi doonaa inuu u tixgeliyo saaxiib, qof wax ka baran dhamaadka akhrinta. Waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelatid dhinaca shucuurta.
Akhriso la soo jeediyay: Xisaabinta Maskaxda ee Sean d’Souza
Markii aan weydiistay bloggers talooyin sheeko xambaarsan si ay ugu jiraan buuggan, saaxiibka blogger ayaa ii sheegay buuggan kaas oo gacan ka gaystay inuu hagaajiyo qoraaga iyo seddaxaad oo heerkiisa ah si guul leh.
Bogagga ugu horreeya ee 34 ee Baaritaanka maskaxda ayaa just heli karaa qaabka bilaashka ah ee PDF halkan. Waan akhriyay waana kuu sheegi karaa – Qaabka D’Souza ee loo adeegsado luqadda dhagaystayaasha si aad u gudbiso farriintaada ama u bixiso (ama u sheegto sheekadaada) shaqeyso.
Waxaa jira buugag badan, laakiin ka bixitaanka ayaa ah in aad u dhowdahay inaad akhristahaaga u timaaddo, inta badan qoraalkaagu wuxuu dhisi doonaa isku xirnaan iyo ugu danbeyn badalaya.
« Quam ut amplio vestri saidi teisendamise määr: Veloxi näpunäited + juhtumianalüüsid Si të përdorni autentifikimin me dy faktorë me WordPress »
7 Tilmaamaha Habboonida si us plau guilaysatid akhriskaaga Blog